China isampuli intambo bristles ibhrashi yamazinyo mveliso kunye nabenzi Enyuan
Antibacterial ibhrashi yamazinyo
Ibhulashi yamazinyo ethambileyo
Bamboo Ibrashi yamazinyo
Isibini semisonto ethambile ibristles ibhrashi yamazinyo
Le bhulashi yamazinyo yenzelwe ngokukodwa iintloko zebrashi ezinentliziyo emiliseyo, ezidityaniswe kwipateni emilise okwentliziyo. Intloko yebrashi yenzelwe iXiaoqiao, efanelekileyo kwaye eguqukayo ukucoca amazinyo ezikoneni
Igama lemveliso Ibrashi yamazinyo emibini
Iimbonakalo Coca, khusela intlaka
Izinto zokubamba ibrashi TPU
Ukucaciswa kwebrashi uboya obuthambileyo
Ububanzi bebrashi 0.01mm
indawo yemvelaphi Jiangsu, China
0.01mm uboya besilika obulungileyo
Incam yedayim ye-brush filaments encinci njenge-0.01mm ayinakucoca kuphela amabala kumphezulu wamazinyo, kodwa inokungena nzulu kwi-gingival sulcus kunye neendawo zokuthintela; imisonto ethambileyo yebrashi inyamekela iintsini, isenza izinyo ngalinye licoceke kwaye licace njengothando ngaphandle kokushiya ukungcola.
Isiphatho sebrashi sisebenzisa umbala omnyama nomhlophe weklasikhi, uyilo lulula kwaye lonwabile, kwaye umzimba uphela wenziwe ngeplastikhi yokutya, ekulungeleyo ukubanjwa
Uhlamba njani amazinyo ngokuchanekileyo?
Kuyacetyiswa ukubuyisela ibrashi yamazinyo kangangeenyanga ezintathu. Okude ukuba ibhrashi yamazinyo isetyenzisiwe, kokukhona i-bristles iya kunxitywa kwaye ithambeke kwaye amandla okucoca aya kuncipha. Kwangelo xesha, intloko yebrashi ikwangumhlaba wokuzalela iintsholongwane.
I-1: I-bristles kunye namazinyo athambekele kwi-angle ye-45 °, ngokucinezela ngobunono, ngebrashi amaxesha angama-4-6 ngokuthe tye kwaye ubrashi ngokuthe nkqo.
2: Bhrasha icala elingaphandle lamazinyo aphezulu nasezantsi kuqala, emva koko ubrashi icala elingaphakathi lamazinyo, uhambisa ibhrashi yamazinyo umva naphambili.
3: Bhrasha indawo ehlafunwayo, beka ibrashi yamazinyo ethe tyaba, uhlunguzele ibrashi yamazinyo emva naphambili ngokufutshane, kwaye ucoce ngononophelo amazinyo.
I-4: Bhrasha umva wentaba ukucofa ezantsi, kufuneka uhlambe umphambili webrashi ukusuka ngaphakathi nangaphandle.
5: Okokugqibela, brasha ulwimi, thambisa ngobunono ukusuka kwisiseko solwimi ukuya kwincam yolwimi ukususa ukutyabeka ulwimi nokususa iintsholongwane.
I-6: Bhrasha amazinyo akho ngomgangatho ophezulu kangangemizuzu emithathu ngalo lonke ixesha ukugcina umphefumlo upholile.
Egqithileyo amawaka amawaka ibhrashi yamazinyo eyilwe ngokuthobekileyo ayinakulimaza iintsini
Okulandelayo: i-oem ithambile ibrashi encinci yebhrashi yentloko
Gum Ibrashi yamazinyo ethambileyo
Ibrashi yamazinyo ethambileyo
Ibhulashi yamazinyo ethambileyo kakhulu
Polyester TPU ibhrashi ibhrashi yamazinyo High ikhusela t ...
Umgangatho ophezulu wasekhaya nano ibhrashi yamakhaya
Amalahle omoya ibhrashi yamazinyo elwa nendlu
Ibhulashi yamazinyo ethambileyo enentloko eninzi
Ibhrashi yamazinyo ibrashi isebenzisa ucingo lwenylon pbt
Ibrashi yamazinyo yabantu abadala ethambileyo enee-Eco
Idilesi: Inombolo yama-45, iZowuni yoXiniso lwezoShishino, iDolophu yaseCaoyun, iSithili saseHuaian, iHuaian, iJiangsu, China